Maxay qubeysashada, sabeynta iyo daaweynta kaleba kaaga caawin karaan inaad dareento cusbooneysiin
Qof kastaa wuxuu leeyahay dariiq ka duwan oo lagu yareeyo daalka, dad badan ayaa dooran doona inay qaataan qubeys kulul ama ay qaataan qubeys kulul, daalka si dhakhso ah ayaa loo yareyn karaa, ka dibna waxay u muuqataa inaad bilaabi karto maalin cusub. Waxyaabo badan oo fooxa guba waa iib, laakiin kaliya maahan wax la dhuuqo ...
Jacuzzi noocee ah ayaa fuliya dhammaan riyooyinkaaga jacuzzi
Dhamaadka maalinta mashquulka ah ee shaqada, dabeecadda inaad guriga aado si aad u nasato, ku shub hal koob oo khamri casaan ah, dhig gabal muusig dabacsan, xumbo ku jirta jacuzzi oo ay ka buuxaan caleemo ubax, u oggolow xumbada xumbaysa inay dhaqdo daal dacwadeed , tani waxay u badan tahay inay tahay rabitaanka qof walba! Gabdho badan ma ...
Maxay yihiin waxtarka caafimaad ee ku dabaalashada ilaha kulul
Qof kastaa wuxuu jecel yahay inuu yeesho dabaal kuleyl dibadeed oo dabaasha ah, maxaa yeelay isboortiga dabbaasha biyaha kulul ma aha oo kaliya nasashada jirka iyo maskaxda, laakiin sidoo kale waxay u fiicnaan karaan caafimaadka. Ma jeclaan laheyd inaad ogaato waxtarka dabaasha gu'ga kulul? Barkadda dabaasha bannaanka Gu 'fudud, sidoo kale ogow ...
Maxay yihiin astaamaha barkadda villa
Maalmahan, barkadaha dabaasha ee gaarka loo leeyahay waxay noqdeen qaybta caadiga ah ee villa, gaar ahaan guryaha fasaxa ah. Barkadda dabaasha ee gaarka loo leeyahay waxay dadka ka caawin kartaa inay ilaashadaan sirtooda oo ay noqdaan kuwa madadaalo badan. Barkadda dabaasha ee gaarka loo leeyahay ayaa sidoo kale gacan ka geysan karta hagaajinta muuqaalka fiillooyinka illaa e ...
Barkadda 10-mitir-laba-jibbaaran ah waxay u eg tahay mashiinka lagu riixo ee biyaha ku jira, taas oo kuu oggolaaneysa inaad dareento dareenka dabaasha ee badda
Markay xagaagu timaado, waa xilligii aan ku raaxeysan lahayn biyaha, laakiin xaddidaadda juquraafi ahaan, waxaan badanaa u ordi karnaa barkadda dabaasha ee dadweynaha. Laakiin barkadaha dadku waa camiran yihiin tayada biyahana lama hubo. Inta badan, waxaan eegi karnaa oo keliya p ...
Barkadaha Infinity Sideen ayaynu, dabbaal ahaan, u dooran karnaa halka lagu dabbaasho iyadoo la wajahayo cudurka faafa
Goobaha lagu dabaasho ee dalka oo dhan ayaa loo xiray cudurka dillaacay. In kasta oo qaar ka mid ah shaqaalihii dhallaanka ee dhaweyd shaqeynayey, laakiin loogu talagalay warshadaha dabaasha, saameynta ayaa ahayd mid lama huraan ah. In kastoo qaar ka mid ah dabiicadaha dabiiciga ah ay ku soo kabteen heerkii xilli-ciyaareedka ka dib, badanaa sw ...
Barkadda Infinity barkadda Jacaylka, jacaylka dabaasha sidee u doorataa barkad kuu gaar ah
Jacaylka nolosha, jacaylka dabaasha, marar badan waxaad dabaalan doontaa jadwal lagama maarmaan ah. Xilliga xagaaga, aada xeebta, barkadda dabaasha dadweynaha, ama barkadda hudheelka kulul, hoolka dabaasha? In kasta oo ay jiraan xulashooyin badan, sidoo kale waxaa jira dhibaatooyin badan oo soo food saara, sida: safetka ...